“Arsenal kama cabsaneyso Real Madrid.”. – Gool FM
“Arsenal kama cabsaneyso Real Madrid.”.
(London) 08 Dis 2016. Arsenal way garaaci kartaa Real Madrid haddii labada kooxood la isku beego wareega 16-ka Champions League ee la sameyn doono Isniinta sida uu qabo tababare Arsene Wenger.
Gunners ayaa ku dhammeysatay kaalinta koowaad ee group-keeda kaddib markii ay kulankeedii ugu dambeeyay garaacday Basel halka PSG ay labo dhibcood lumisay kaddib bar-baro ay la galeen Ludogorets.
Arsenal ayaa iminka wajaheysa kooxaha ku soo baxa kaalinta labaad, Real Madrid iyo Bayern Munich ayaa ka mid ah kooxaha la filayo inay qoorta surato.
Laakiin macallinka reer France ayaa sheegay in kooxdiisu aysan cidna ka baqaneyn.
“Waxaad eegeysaa kooxaha aan ku aadi karno, qaarkood waa kuwa heybad leh, oo aad u adag, waxaadna jeclaan lahayd inaan iraahdo ma doonayo inaan ku aado kooxdan ama kooxdaa laakiin taa waxay durba na dhigeysaa boos liita haddii ay dhaceyso,” Wenger ayaa sidaa ka yiri shirkiisa jaraa’id.
“Waxaad ku aadi kartaa Real Madrid, mid ka mid ah kooxaha ugu cad cad inay ku guuleystaan tartanka, xitaa haddii aan la ciyaarno waxaan heysan doonaa fursad aan ku soo gudubno.
“Carqalad kale oo dhab ah oo na heysata ayaa ah in lixdii sano ee ugu dambeysay aynaan u soo gudbin wareega sideed dhammaadka Champions League. Waxay noqon doontaa midaaa tartan wayn oo kooxdeyda ah wayna ku raaxeysan doonaan.”.
Marco Reus oo amaanay saaxiibkiis Aubameyang kadib barbarihii xalay
Ronaldo oo ka hadlay dhibaatada canshuurta ee lagu soo eedeeyay